ZTE Grand S LTE | Laga soo bilaabo Linux
ZTE Grand S LTE Waa taleefanka casriga ah ee adduunka ugu caansan 5 ”, oo dhuuban oo kaliya 6,9mm. Kuwii ku arkay MWC ee Barcelona, ​​way la yaabeen muuqaalkaas. In yar oo la arkay, waxay umuuqataa wax aad u cajaa'ib badan, waana shaki la'aan mid ka mid ah Androids-ka ugu wanaagsan ee suuqa ku garaacaya, in kasta oo ay leedahay waxyaabo u gaar ah oo marka hore la yaab noqon kara.
ZTE wuxuu dhigayaa asal cad oo ku saabsan Android, isagoo matalaya warqad dammaanad ah. Badhamada kaabiga ku haya qaybta hore ee cutubku sidoo kale waa mugdi, mana arkaysid iyaga, taas oo ay adag tahay in lala qabsado. Haddii kale, qalabku waa mid ixtiraam leh: ixtiraamku waa: wixii ka dambeeya shaashadda Full HD (440 ppi), waxay leedahay kamarad 13 MP ah, 2 GB oo RAM ah iyo 16 GB oo bannaan gudaha ah, oo leh teknoolojiyadda LTE.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » dhowr » ZTE Grand S LTE: Shirkadda weyn ee Shiinaha
Beddelaha Xidhmada: sida loogu beddelo baakadaha iyada oo loo marayo qaab muuqaal ah